Children of Somalia - Their future our purpose
→ Next: Formål
Ujeedadayadu waa inaan u’ gargaarno carruurta Soomaaliyeed
Taasoo aan u’ marayno inaan dugsiyo u’ dhisno, isla markaana an u’ suurto gelino daryeel caafimaad oo ay ka helaan. Xarumo caafimaad oo dhismaha dugsiyada qayb ka ah.
Inaan siino carruurta soomaaliyeed oo dhan, kalsooni ah, inay leeyihiin awood abuur Eeebe ah oo Ilaahay ku abuuray ahna isbeddel dhanka wanaagga ah, ayna abuuri karaan isbeddel dhab ah oo dhanka wanaagga ah oo ay u’ sameeyaan naftooda iyo Soomaaliyaka bulsho ahaan.
In Soomaaliya ay carruurteeda oo dhammi hely karto daryeel caafimaad Iyo dugsi wax barasho, taasoo u’ suurto gelinaysa cunug waliba inuu Abuurto nolol ku dhisan is-ixtiraam, ixtiraam bulshada iyo cimilada ku xeeran, taasoo wax ku ool u’ ah isaga, Soomaaliya iyo dunida kale oo dhan.
Sida ugu wacan oo aan u taageernaa waxay ku salaysantahay waayo-aragnimada aasaasahayaga, Ducaale, oo ku salaysan sanado badan oo uu mashaariic gargaar oo kala duwan ka fuliyey Soomaaliya.
Ugu horraynta waxaannu dhisaynaa dugsiyo wax barasho waxaan kaloo dhidibada u’ aasaynaa helitaan baaritaan caafimaadka aasaasiga ah oo ardadu ka hesho xarumaha caafimaadka ee dugsiyada ka dhex dhisan.
Waxaannu abuuraynaa qaab dhismeedka dadaalka hawlgalka annagoo u’ marayna deeqaha aasaasyada gargaarku bixiyaan, Sharikadaha, jaaliyadaha, qoysaska iyo ashqaasba. Iyada oo aan heshiis wadashaqayneedla gelayno dad Soomaaliya deggan, dadkaas oo dadka deegaanka ku hawlgelinkara iskaa wax u’ qabso inay ku shaqeeyaan, ayaa waxaan sugaynaa, gargaar si qofku isu gargaaro, taasoo anfici doonta jiilasha soomaaliyeed ee soo socda
Ahmed Farah Dualeh
Isgaarsiinta iyo pr
Store Kongensgade 49, 1. sal
t+45 7164 5618
ig@Children of Somalia
Vedtægter • Bestyrelse
© Children of Somalia
The website made with by woumedia.